Iwe Haudi Bhizinesi Degree kuti Unzwisise Izvi | Martech Zone
Iwe Haudi Bhizinesi Degree kuti Unzwisise Izvi
Chitatu, October 23, 2013 Chitatu, October 23, 2013 Douglas Karr
Zvakanaka, inguva yekuita rant. Vhiki rino ndakarohwa kakati wandei uye ndiri pachokwadi pakurasikirwa kwekuti vamwe vevanhu ava vakazviita sekureba sezvavanenge vari mubhizinesi. Ini ndoda kutora zvinhu zvishoma zvakatwasuka kana iwe uchienda kunotaurirana nekutenga masevhisi kubva kune yako inotevera Agency.
Mutengo ndeweIwe Waunobhadhara, Kwete Izvo zvaunowana
Uyu ndiwo mutengo wechigadzirwa kana sevhisi iwe yauri kutsvaga kutenga. Nepo mutengo wezvigadzirwa zviviri kana masevhisi maviri angave akafanana chaizvo, icho chaicho chigadzirwa kana sevhisi yauri kutambira haizove yakafanana. Nekuda kweizvozvo, ndokumbira usabvunze rondedzero yekutenga uye nekukumbira makotesheni ane mwero… isu tinoziva zvauri kuita. Iwe urikutora rondedzero yekutenga uye ndokumbira makotesheni ane mwero uye wozvitenga kune wese munhu. Hatisi vamwe vese. Zvisinei nekuti rondedzero yekutenga yakadzama sei, ndinodzokorora, isu hatisi vamwe vese. Zvatinokupa iwe unenge wakasiyana. Zvimiro zvakasiyana, akasiyana masevhisi, akasiyana nguva, maitiro akasiyana uye pakupedzisira akasiyana bhizinesi mhedzisiro.
Kana iwe ukashanyira agency kunoenderana nemutengo, iwe uri akarasika uyo asinganzwisise bhizinesi. Ikoko, ndakazvitaura. Kushambadzira pamhepo hakusi Wal-mart. Zvimise.
Kubhadhara Zvishoma Hazvireve Kuti Wakachengetedza Mari
Izvo iwe zvawakasarudza uye nekubvumirana pakubhadhara zviri, netarisiro, zvakasungirirwa kune iyo kukosha iwe yaunofungidzira kuti uchave uchigamuchira nechigadzirwa kana sevhisi. Kana iwe wakagamuchira rezinesi repagore re software uye software ikakubatsira iwe kuita zvinhu nenzira inobudirira (aka: Return on Investment), kwakubatsira iwe kuchengeta bhizinesi rakawanda (aka: Return on Investment), rakakubatsira iwe kuwana bhizinesi rakawanda (aka: Return on Investment) kana yakabatsira iwe kuwedzera purofiti (aka: Dzoka paInvestment) ipapo iyo kukosha kwezvawakagamuchira zvakapfuura mutengo wawakabhadhara. Ichi chinhu chakanaka. Izvi ndizvo zvaunoda kuita.
Zvakare, kubhadhara zvishoma mari uye kusawana kudzoka pane kudyara kwakaipa. Izvi zvinoreva kuti warasa mari… kwete akaponeswa mari. Saka… enda unotenga mucherechedzo pane saiti yechaunga panzvimbo yekuhaya kambani yekumaka uye kushandisa manhamba matanhatu kuti utaridzike kunge bhirioni remadhora mubatanidzwa pachinzvimbo chechitoro chedhorobha. Iwe unofanirwa kutarisira mhinduro dzakasiyana uye imwe kukosha kune iyo mari yawakaisa mari.
Kubhadhara Zvimwe Hazvireve Kuti Wabviswa
Terevhizheni yaAmai vangu yakangotyoka svondo rino. Akatarisa kumashure uye yaive nemakore manomwe uye zvakamubhadharira madhora zviuru zviviri nemazana maviri paakazvitenga. Nhasi, Amai vangu vakaraira iri nani terevhizheni ine yakafara skrini ye $ 7. Akanga achishamisika nekuona kwazvakaita tekinoroji nekuchimbidza uye nekukwanisa kwake kutenga terevhizheni nyowani iri nani. Akange asina kutsamwa kuti akabvarurwa makore manomwe apfuura. Aifara kuti akawana chimwe chinhu chinonakidza izvozvi. Ichi chinhu chakanaka.
Isu munguva pfupi yapfuura zvoga saiti kuongorora kuongorora izvo zvaimbotora vhiki kuti vanhu vaviri vapedze nemaoko. Izvo zvakatitorera angangoita makumi matanhatu emurume-maawa nemaakateedzana esoftware ekushandisa atakatipa mvumo izvozvi anotitorera isingasviki awa. Ini ndakarega vamwe vedu vatengi vaifara nezvakaitika zvedu zvekumhan'ara vazive kana iyo nyowani yekuedza uye voita kuti vazive izvozvo - kubvira yedu mari izvozvi chidimbu chezvavaive, isu taive tichipfuudza mari idzodzo kune vatengi vedu. Zvakakosha - izvo zvavakabhadhara kwenguva imwe vanogona kuwana gore rese remishumo kubva kwatiri.
Vazhinji vakasaina, asi mumwe akandinyorera ndikati vakatsamwa kuti vaive kubirwa kuti vakabhadhara zvakanyanya pamushumo wapfuura. Ehezve, patakaendesa chirevo, ivo vakafadzwa ... vasina kusvotwa. Ivo vakashandisa rondedzero iyi sepuratifomu yekuvandudza yavo yepamhepo yekutengesa nzira yegore rinotevera. Zviuru zvishoma zvemadhora kudyara mumushumo zvaizoguma nemazana ezviuru zvemadhora mukudzoka. Izvi ndizvo chaizvo zvavaifunga, kusvikira tadzikisa mutengo wedu. Patakadzikisa mutengo isu neimwe nzira takachinja kubva pakukosha kukuru kuenda pakubvarura.
Zvino izvo rant yapera, ini ndichataura izvi. Tichashanda nemazvo sezvinobvira kuona kuti kukosha kwebasa ratinoita kunopfuura mutengo wauri kubhadhara. Patinoita izvo, iwe unowana epamusoro mabhizinesi mhedzisiro. Paunowana mhedzisiro yepamusoro yebhizinesi, iwe unozokoshesa basa ratiri kukuitira. Kana isu tikasawana izvo zvabuda, saka tinogona kuzvikurukura zvakare.
Tags: bokatengamutengokunyatsoshandakuora mwoyotora chaunobhadharamutengoquotesrondedzeroukoshi
Ita Mitengo uye Kuenzanisa Chati SaNinja
Vhidhiyo Tsigiro muemail iri Kukura - uye Kushanda
Gumiguru 29, 2013 na1: 54 PM
Gumiguru 29, 2013 na2: 03 PM
Stacy Wemamwe Marudzi
Dec 13, 2013 pa 8: 28 AM